Nepali Grammer kina garho?
Topic: Nepali Grammer kina garho?
Author Topic: Nepali Grammer kina garho? (Read 965 times)
« on: June 16, 2015, 10:15:40 PM »
हाम्रो schooling एउटै हो उहि बाताबरण, लगभग पढेका किताबहरु सबै उहि। SLC सम्ममा मान्छेको बेस बनी सक्ने हुनु पर्ने हो। त्यस पछिका बर्षहरुमा भने बाताबरण फरक भयो !
मेरो भाषा झनै ठिमाहा, अशुद्ध र अपुरो छ त्यो मलाइ पनि थाहा छ। तर त्यसो भन्दा के मैले लेख्नै छोड्ने? कोशीस गरेकै हो बुताले भ्याउदैन त के गर्ने?बोल्नै छाड्ने? घर सबका एकरुपका हुदैनन् तर बनाउनेले आफ्नु बुताले सकेसम्म धर नै बनाउने कोशीस गरेकै हुन्छ अोतका लागि मात्रै होइन !कसैका महल होलान कसैका झुपडी त कसैका कुटि झै सुन्दर भने कसैका भाडा उठाएर जिविकोपार्जना साधन ! लुगा सबैका एकैखाले हुदैनन् सबैले राम्रै देखिन खोजेकै हुन्छ भलै हामीलाइ नसुहाउदो लागेको होस ! खाना पेट भर्नका लागि मात्र होइन मिठै खान खोजेको हुन्छ सबैले । अर्काले हेर्दा पोशण नपुगेको ,नमीठो आदि इत्यादि होला !
यहि लेख्दा पनि १०- १५ ठांऊ गल्ती भए होलान ! भलै मलाइ थाहा नहोस ! के गर्ने? मैले नलेख्ने ? शुद्ध लेख्नन कोशिस गर्ने हो ! सकिएन भने सकिएन ! पढ्नेले मिलाएर बुझ्ने ! सबै कुरामा एकरुपता हुन सक्दैन भने भाषामा चै सोरै अाना किन? समय अनुसारको लचक आएन भने शुद्ध भाषाको आत्माको शान्तिको कामना गर्नु पर्ने दिन पनि आउला !
हाम्रा बेद पुराणहरु निकै गहकिला साहित्य हुन् भन्छन ! भाषाकै कारणले त होला नि समा्न्य मान्छेले नपढेको नबुझेको ! सहज सरल भाषामा भए धेरैले पढ्ने थिए होलान् ! झन त्यसको गलत ब्याक्ख्या गरेर गुढ रहस्य बताएर धर्मको मोड नै परिवर्तन भएको होला ! भाषाको नि त्यै हविगत नहोस ! जय होस !
Re: Nepali Grammer kina garho?
« Reply #1 on: June 16, 2015, 10:28:13 PM »
भाषा अनुशासनहीन र अव्यवस्थित हुन सक्दैन । मैले मान्नै पर्छ ।
तर भाषा आफैमा गतिशील र परिवर्तनशील वस्तु हो र यस्तो परिवर्तन कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेर एकाएक हुने होइन । यो निरन्तर चलिरहने अन्तर्सङ्घर्षको परिणाम हो । धेरैले रुचाएको र सबैभन्दा बढ़ी अनुशासित ठानिएको संस्कृत भाषा पनि बदलियो । अनुशासन रूढ़ भयो भने भाषाले त्यसलाई छोडेर अघि बढ्छ । पाणिनि व्याकरण यति अपवादरहित र कडा भयो कि भाषाले त्यसलाई छोडेर अन्तै हिँड्यो र आज हिन्दी, नेपाली, मराठीजस्ता नव्यभारतीय भाषाहरूको जन्म भयो ।
अक्सफोर्डले निकाल्ने अंग्रेजीको शब्दकोशको हरेक संस्करणमा सयौं शब्द हटाइन्छन् र थपिन्छन् ।
हिजो हामीलाई शुद्ध लागेको भाषा आज अशुद्ध हुन्छ र भोलि फेरि शुद्ध हुनसक्छ ।
परिवर्तनकै पछि लागियो भने पनि भाषाको मौलिकता मर्छ अनि शुद्धताका नाममा कठोर भइयो भने पनि भाषा मर्छ । घरको मूलभूत उद्देश्य ओत नै हो...अरू कुरा ओतपछिका हुन् । घरको ओतबाहेकका अन्य पक्षमा सम्झौता हुनसक्छ तर ओतमा हुँदैन ।
र पनि, भोलि पक्कै मरिन्छ भनेर आजै खुट्टा फ़ाल्नु त हुँदैन नै । भोलि भाषा फेरिन्छ भनेर आजै मर्यादा नाघ्नु उचित होइन ।
« Reply #2 on: June 16, 2015, 10:29:29 PM »
Ganesh Chapagai एक पटक फेरि:-
१) नेपाली भाषा (वा अरू जुनसुकै भाषा पनि) कसरी शुद्ध र सरल तरिकाले प्रयोग गर्ने (लेख्ने, बोल्ने र पढ्ने) भन्ने विषयमा छलफल चलाउनु राम्रो कुरा हो।
२) नेपाली भाषाको प्रयोगमा ब्यक्ति, स्थान, समय, विधा इत्यादि पिच्छे फरक पर्नु पनि स्वभाविक छ ।
३) भाषाको यहि फरक प्रयोगले नै विवाद र छलफललाई निम्त्याउँछ, जुन भाषाको जीवन हो ।
४) भाषा क्षेत्रमा लागेका धेरैजसो विद्वानहरू कुनै पनि भाषाको एउटा मानक रूप होस् भन्ने मान्दछन् ।
५) नेपाली भाषाको प्रयोगमा रहेभएका विवादहरू पनि त्यस्तै मानकहरूको निर्धारण गरी समाधान गर्न सकिन्छ ।
६) तर-गाँठीकुरा के भने, त्यस्ता मानकहरूको निर्धारण कसरी हुन्छ वा कसरी गर्ने वा कस्ले गर्ने भन्ने नै हो ।
७) स्तरिय नेपाली भाषाको प्रयोग गर्ने भनिएका संस्थाहरू(एकेडमी, विश्वविद्यालय,संचारजगत आदि) ले लेखेका/बोलेका कुराहरूमा पनि एकरूपता छैन ।
८)नेपाली भाषामा प्रकाशित कृतिहरू पनि भाषाको प्रयोगमा विवाद मुक्त छैनन् ।
९) त्यसैले, नेपाली भाषाको प्रयोगको विषयमा छलफल गर्न, विवादहरू छिनोफानो गर्न आगामी समयको लागि दिशानिर्देश गर्न नेपाली भाषा सम्बन्धि वृहतर सम्मेलन गर्नु आवश्यक छ ।
१०) नेपाली भाषा सम्बन्धि यस्तो संम्मेलन पहिला भएको मेरो ज्ञानमा छैन। नेपाली भाषा सम्वन्धि यस्तो सम्मेलन गर्नु र भाषा विवादका विषय समाधान गर्नु त्यति सजिलो नहुन पनि सक्छ । तर हिम्मत हार्नु हुदैन ।
११) जहाँ सम्म भाषाको प्रयोग (खास गरी लेखाई/छपाई) मा प्रविधि प्रयोगको कुरा छ,त्यो पनि मान्छेले नै बनाएको हो र आवश्यकता अनुकूल निर्माण र परिवर्तन गर्ने कुरालाई उठाइए बेस होला ।
१२) हरेक कुरोको नियम भएझैं हरेक भाषाको पनि आफ्नै नियम हुन्छ । जान्दैनजान्ने ( लेख्न),ले सिक्न प्रयत्न गर्नु र अलिक जान्नेले त्यसलाई सुधार्न प्रयत्न गर्नु आवस्क र स्वभाविक छ । बेनियम संग प्रयोग गरिए त्यो भाषा हुदैन ।
१३) हाललाई भने प्रतिनिधि भनिएका/ठानिएका ब्यक्ति वा संस्थाहरूले नेपाली भाषामा सम्प्रेसण गर्दा जहाँसुकै भएपनि सकेसम्म शुद्ध र सरल/सजिलै बुझ्न सकिने गरिदिए हामी सिकरूलाई हौसला मिल्ने छ ।
« Reply #3 on: July 10, 2015, 04:22:49 AM »
« Reply #4 on: July 10, 2015, 04:23:37 AM »
from - nepalibhashabyakaran.blogspot.com